DAAWO: Amiin Camir oo Sawir Murugo leh ka sameeyay Jubbaland iyo Madaxwaynaha Kenya | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
DAAWO: Amiin Camir oo Sawir Murugo leh ka sameeyay Jubbaland iyo Madaxwaynaha Kenya
Oct 8, 2019 - 12 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Farshahanka Soomaaliyeed ee Amiin Caamir ayaa sawir Murugo Xambaarsan wuxuu ka sameeyay Xaalada maamulka Jubblanad, Wuxuuna ku muujiyey inuu dhibaato ba’an ku hayo maamulkaasi madaxwaynaha Kenya Uhuru kenyatta.
Sidoo kale sawirka waxaa ka muuqda Madaxwayneyaashii Hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan iyo Cabdikariim Guuleed oo dhowaan gaadhay halkaasi.
Diyaaraddii ay kismaayo ku tagteen ayaa la sheegay inay sifo sharci darro ah ku duushay, Waxayna taasi keentay in hada lagu xanibo Garoonka kismaayo.
Mudooyinkii dambe waxaa taagnaa Khilaaf ka dhashay Doorashadii Axmed Madoobe, kadib markii Dawladda Soomaaaliya iyo Beesha Caalamkuba ay shegeen inaysan sifo sharci darro ah ku dhacday.
Wasaaradda Arimaha Gudaha DFS ayaa maalin ka hor soo saartay Habraaca Doorashada Madaxwaynaha iyo Xulista Baarlamaanka Jubbbaland, si ay mar kale u dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo.
Amiin caamir qof muslim ah caydiis miyuu xirfad kadhigtay.
Adeer amiin caamir wuxuu kahadlaa runta aadan adigu arkin ama dadka qabyaaladu madax martay ee tageraya qof dalkiisii inoow burburiyo loo adegsanayo koleeyba amiin caamir waa kawadane sanyahay axmaq madoobe
Amiin caamir runta iyo waaqica jira ayuu sawir ku cabiraa.
Lkn nin meel kale ucadahay yeelkadii oo aan dareemayn xaqiiqda.
Sawirka aamiin caamir waa sax 100%,
Sadexdan iyo kuwo kale ee aan meehan ka muukhan waa dabadhlifyo kenya marna itoobiya.
Adiga ma soomalida guumaysiga madow jecel baa tahay ama tigreega iyo kenya meesha keensadeen ee qaranimada Somalia loo adeegsanayo baad tahay sida aden bare duale,aniga somali maahi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
AMIIN CAAMIR WAA MUJAAHID SOOMAALI SOOMALI DHALAY OO WADANI AH NINKII KA NIXI LAHAA IYO KII KU FARXILAHAABA WAANA DHAB SAWIR KAAS AXMED MADOOBE INUU JUBA LAND GODOOMIYO OO CADOW SHISHEYE DUGSADO WAA XAARAAN MAQDAC AH IN LAYEELO VIVA AMIIN caamir iyo dawlada SOMALIYEED iyo qofkasta OO jecel xoriyada dalka somaliya
Sawirka waxaa ka dhiman DABO-QOODHI BARRE DUCAALE oo Luf Lufka UHUURO ka daado AFKA U DHIGAN.
waxa lala yaban yahay … siyasiyintii HAG oo saf
Dheer u galay raali gelinta kenya tolow maxay ka
Faidayan colaada QARANKA somaliyeed
Waxaad cadeystay in aadan wax damiir ah oo somali imot Aad laheyn oo Aad qalbiga ka baqtiday gumasigii Kenya iyo itopa maahane aadna Aqoon u laheyn Xornimo iyo xordaro
Aamiin Caamirna Waa Runsheeg
Muxuu uga reebay
Cumar C sharmarke
A Qadir Cosoble
Wixii sawiro jaale siyaad iyo waxqabadka kacaanka Amir Camir meel walba sawire ahaa.
He is a legend runtii xagga artiska laakiin hunguri qaaday.
Asaga waa oday oo wiilkiisa sawira.
Waa good news in Amin Camir aqoontiisii dhiman, isku xaafad Weliyoow Cadde isla degenayn in caruuriisa meeshii ka wadaan waan ku farxay..runtii
Laakiin maamta siyaasadda Somaliya wuu ka dhacsan yahay, waa ragga nin awood badan aaminsan, wixii kale waa dabadhilif in sawir lagu foolxumeeyo….
Amin Camir daanyeer igu shubo ah.
Waa dadka af ku dhiiglaha loo yaqaan, gacan ku dhiiglaha ma dhaamaan marmar waaba ka daran yihiin marmar oo gabaygooda kumanaan u dhintaan.
Amir Camir waa shaqadiisa in cidda lacag siisa sawiro sida u rabaan..